जानी राखौँ यौन तृष्णा उच्च जागेपछि महिलाहरुले देखाउँछन् यस्ता हर्कत ! – Saurahaonline.com
जानी राखौँ यौन तृष्णा उच्च जागेपछि महिलाहरुले देखाउँछन् यस्ता हर्कत !
यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो लामो लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भो भने उनलाई उत्तेजना भैरहेको छ भन्ने बुझ्नुस् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि गहिरो र लामो श्वास फेर्छन् । महिलाहरु उत्तेजित भएपछि उनीहरुको मुटुको ढुकढुकी पनि बढ्छ ।कतिपय महिलाले नजानिदोगरी पुरुषको संवेदनशील भागहरुमा छुने समेत गर्छन् ।
यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा आफ्नै शरीर गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर वा अन्यत्र हात राख्छिन् भने बुझ्नुस् उनलाई तपाइँसँग संसर्ग गर्न मन छ । अझ स्त्रीले तपाइँको ओच्छ्यानमा बसेर ‘कस्तो नरम ओच्छ्यान’ वा त्यसमा पल्टिने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने कुरा बुझ्नुस् उनी के चाहन्छिन् ।
एक सम्बेदनशील अंग मात्र छोयो भने युवतीहरु आफुलाई सेक्सबाट बचाउन सक्दैनन्
उत्तेजना र सेक्सको गहिरो सम्बन्ध छ । पुरुष वा महिला सेक्सको समयमा जति धेरै उत्तेजित हुन्छन् त्यती नै सेक्स गर्नमा मज्जा आउँछ । तर कहिले काँही पुरुषहरु उत्तेजित हुन सक्दैनन् र उहाँहरुको सिर्घस्खलन भएर उहाँहरु पुनः सेक्स गर्ने स्थितिमा हुँदैनन् । बाटोमा हिडदा वा कही बस्दा पहिरनलाई नै हेरेर पुरुषहरुले जिस्काउने पनि गर्छन । तपाई आफनो साथीसँग सेक्स गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाईको घरमा कोही पुरुष आउँदै छ भने तपाई उत्तेजक ड्रस लगाउनुस । अर्थात तपाईको शरिरका धैर भन्दा धैर अंगहरु हेरियोस् ।
जस्तो कि तपाईको बाहिरि पहिरनबाट भित्रि पहिरनहरु झल्कियोस् । तपाईको बच्छस्तनको केही भाग देखियोस् अथवा तपाईका सम्बेदनशिल अंगका केही भागहरु लुगामाथि हेरर पनि अनुमान गर्न सकियोस् । यस्ता पहिरनले पुरुषलाई समान्य रुपमै उत्तेजित गर्छ । त्यस्तै तपाईको परफयुमले पनि केटा साथीलाई उत्तेजित गर्नमा सहयोग गर्छ । तपाई सेक्सका लागि जाँदै हुनुहुन्छ वा आफनो साथीलाई उत्तेजित पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने फरफयुमको प्रयोग पनि गर्नु होला । डान्स स् डान्स अर्थात नृत्य पुरुषलाई अत्याधिक उत्तेजित बनाउने गर्छ ।
परापूर्वकाल देखि नै पुरुषलाई उत्तेजित गर्नका लागि मुजरा, नाच घर र डान्स बारहरुको स्थापना भएको छ । तपाई आफनो पुरुष साथीलाई डान्सले पनि आफुप्रति आर्कसित र उत्तेजित बनाउन सक्नुहुन्छ । तपाई आफनो साथीलाई भेटदा डान्सको केही स्टेपहरु गर्नुस् र आफनो शरिरको अंगहरु उनको सामनेमा प्रर्दशन गर्नुस् । डान्स गर्दै उनको नजिक जानुस र उनको शरिरमा पनि स्पर्स गर्नुस् । र, उनलाई आफनो शरिरका सम्बेदनशिल अंगहरु उनको शरिर तिर ढल्काउनुस र हल्का स्पर्स गर्नुस् । तपाईको साथी सेक्सका लागि आतुर हुनेछन् ।-एजेन्सी